Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Peru » Ala ọmajiji 7.5 na Northern Peru
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Peru • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ala ọmajiji abụọ dakwasịrị Peru na Sọnde a, mana ọ dabara nke ọma emeghị nnukwu mmerụ ahụ ma ọ bụ mmerụ ahụ.
Mmebi ndị e dekọrọ na mpaghara Amazon dịpụrụ adịpụ na-abụkarị ihe arụrụ arụ.
Onye isi ala Peru kwuru na gọọmentị ya ga-akwado ndị oke ala ọmajiji nke 7.5 nke ụtụtụ a metụtara n'isi ụtụtụ Sọnde, na-ahapụ mmebi ihe owuwu na mpaghara ugwu nke mba ahụ.
Ọzọkwa, e dekọrọ oke ala ọmajiji nke 5.2 na Lima, isi obodo Peru.
Enweghị iyi egwu mbufịt mbufịt maka oke osimiri Pasifik.
Ọ pụtaghị na ala ọma jijiji ahụ mere n'ime ime obodo nke Northern Peru. Ọ nweghị onye nwụrụ anwụ, mana ụlọ na okporo ụzọ emebiela, dị ka a hụrụ na vidiyo nke ndị uwe ojii mba Peru bulitere.
Ala ọmajiji ahụ mere na Ecuador na ruo Lima.
Nọvemba 28th, 2021, M 7.5 n'ebe ugwu Peru ala ọma jijiji mere n'ihi mmejọ nkịtị na omimi etiti, ihe dịka 110 km n'okpuru elu ụwa n'ime lithosphere e wedara nke efere Nazca. Ngwọta n'usoro n'usoro na-egosi na mgbawa mere na ugwu-n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ ma ọ bụ ndịda-ndịda-ọwụwa anyanwụ pụtara ìhè, na-etinye obere mmejọ.
N'ebe ala ọma jijiji ahụ dị, efere Nazca na-aga n'ebe ọwụwa anyanwụ gbasara efere South America na ọsọ ọsọ nke ihe dịka 70 mm / yr, na-agbada na Peru-Chile Trench, n'ebe ọdịda anyanwụ nke ụsọ oké osimiri Peruvian, na November 28th. ala ọma jijiji. Ala ọmajiji nke ugwu Peru na ọtụtụ n'ebe ọdịda anyanwụ South America bụ n'ihi nsogbu na-ebute site na ntinye nke a na-aga n'ihu; N'ebe a, efere Nazca na-arụ ọrụ seismically ruo omimi ihe dịka 650 km. Ala ọmajiji a mere n'akụkụ nke efere e wedara ala nke butere ala ọma jijiji ugboro ugboro na omimi omimi nke 100 ruo 150 km.
Ala ọmajiji dị ka ihe omume a, nke nwere omimi dị n'etiti kilomita 70 na 300, ka a na-akpọkarị ala ọmajiji "oke omimi". Ala ọmajiji dị n'etiti etiti na-anọchi anya nrụrụ n'ime mbadamba nkume ndị e wedara ala karịa ka ọ dị na oghere dị n'etiti mweda na mwepu tectonic. Ha na-ebutekarị mmebi n'elu ala dị n'elu ihe ha na-eme karịa ka ọ dị n'ihe gbasara oke ala ọma jijiji na-emighị emi, ma nnukwu ala ọma jijiji dị n'etiti etiti nwere ike ime n'ebe dị anya site na ebe etiti ha.
Nnukwu ala ọma jijiji dị n'etiti etiti bụ ihe ezi uche dị na ya na mpaghara a nke slab Nazca, yana ihe omume ise ọzọ dị omimi nke M 7+ mere n'ime kilomita 250 nke ala ọmajiji nke November 28th n'ime narị afọ gara aga. Ala ọmajiji AM 7.5 na Septemba 26th 2005, nke dị na omimi yiri nke ahụ mana ihe dịka 140 km na ndịda nke Nọvemba 28th, ala ọmajiji 2021, kpatara ọnwụ 5, ihe dị ka mmerụ ahụ 70, na mmebi dị ukwuu na mpaghara gbara ya gburugburu. N'oge na-adịbeghị anya, ala ọmajiji M8.0 na Mee 26th 2019, ihe dịka 230 km na ndịda ọwụwa anyanwụ nke ala ọmajiji nke Nọvemba 28th 2021, butere ọnwụ 2.